नक्कलीहरुले यसरी बेच्दा रहेछन् पार्टीको नाम ! « janaaastha.com
नक्कलीहरुले यसरी बेच्दा रहेछन् पार्टीको नाम !
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:२३
२०५६ सालको कुरा हो, बागमती उपत्यकामा पनि जनयुद्ध लोकप्रिय हुँदै थियो । कालीमाटी–कुलेश्वर क्षेत्रतिर आर्थिक काममा जाने साथीहरुले त्यहाँ कोही पार्टीकै मान्छेले सहयोग मागेको तर कार्यक्षेत्र भएका कोही पनि नगएको थाहा भयो । पार्टीकै मान्छे भए पनि त्यसलाई समात्ने निणय भएपछि निश्चल नकर्मीले जनमुक्ति सेनाका दुईजना साथीहरु खटाउनुभयो । सल्लाहअनुसार व्यापारीले दुवैलाई एउटै समय पारेर बोलाए । त्यसपछि उनलाई श्रम शिविरतिर लगियो । ती त कुनै समय बालाजुस्थित सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयमा शिक्षक भएर पार्टी काम गर्दागर्दै पार्टीमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएका व्यक्ति पो रहेछन् । बुद्धिजीवी भएकाले तिनलाई रविन्द्र श्रेष्ठको निर्देशनमा माफी मगाएर छाडियो।
जनयुद्धताका प्रहरीले गिरफ्तार गरेकामध्ये धेरैजसो नक्कली भएको समाचार आउँथे । तीमध्ये कतिपय त शाही सेना र प्रहरीका बहालवाला नै हुन्थे । पिएलएले नियन्त्रणमा लिएका कैयौं नक्कली माओवादी हुन्थे । तर गाउँमा नक्कली कम हुन्थे र कसैले त्यस्तो धन्दा गरिहाल्यो भने सम्पूर्ण नालीबेली थाहा हुन्थ्यो । शहरमा पार्टी कमजोर भएका कारण सही सूचना प्राप्त नहुने समस्या थियो । जसको कारण पार्टी बदनाम भइरहन्थ्यो । शहरमा कालाबजारिया र तस्करहरुको जालो हुने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुले छानविन नगरी रकम दिएर पठाउँथे । तर धेरैजसोले सक्कली हो कि होइन ? आफ्नो लगानी ठीक ठाउँमा पुग्छ पुग्दैन ? बुझेर सहयोग गर्थे । नक्कली गतिविधि सम्बन्धमा पोखराको घटना रोचक छ ।
जनयुद्धको समय थियो । अखिल (क्रान्तिकारी) अर्थात् माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनसँग मिल्ने नाम तत्कालीन एकता केन्द्र (नारायणकाजी समूह) को पनि थियो । पोखरामा उनीहरुका विद्यार्थी पटक पटक पक्राउ पर्थे । त्यस्तो अपवाद किन होला भन्ने प्रश्न उठेको थियो । धेरैपछि कारण थाहा भयो, माओवादीनिकट विद्यार्थी भनेर रकम माग्ने, गिरफ्तार परियो भने नारायणकाजी समूहका हौं भन्ने गरेर संगठित रुपमा ठगीधन्दा चलाउने । त्यसरी सो समूहले पोखरामा ठगीधन्दा चलाएको र त्यसको अनुशरण अन्यत्र पनि भएको थियो । यद्यपि त्यो पार्टी नीति नहुन सक्थ्यो ।
कुनै पनि प्रवृत्तिको जन्मको पछाडि निश्चित आर्थिक र साँस्कृतिक कारण हुन्छन् । त्यो कारणको निषेध नभएसम्म घटनाहरु नयाँ पात्र र रुपमा आइरहन्छन् । २०६७ सालतिरको घटना हो, चितवनमा नक्कलीको बिगबिगी भएपछि वाइसिएलमा क्रियाशील एकजना युवाको चर्चा भयो । मैले वाइसिएलकै जिल्ला नेतालाई भनेर आजभोलि अख्तियारले साना माछा समातेझैं व्यापारीलाई पैसाको नम्बर टिपेर दिन लगाएँ र अर्को कोठामा पहिलेदेखि नै बसेको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर पार्टी कार्यालय ल्यायो । उनलाई रातभरि सम्पर्कविच्छेद गरेर राखियो । एक जना जिल्ला नेताले राति १० बजे हान्ने राँगोझैं नाकका पोरा फुलाउँदै आएर ‘मैले पठाएको हुँ, छोड्नुस्’ भनेका थिए । तर, उनलाई अर्को दिन मात्र माफी मगाएर छोडियो । चरम गुटबन्दी भएको त्यो समयमा ती ठगीधन्दावालालाई छोड्नुप¥यो भनेर कुनै पक्षको नेताको पनि फोन आएन । त्यो घटनापछि ती युवा ठगीधन्दा त के गुटबन्दीमा पनि लागेनन् ।
ठगीधन्दाको सम्बन्धमा चितवनमा अर्को अनुभवी उदाहरण छ । साताव्यापी हड्तालको कार्यक्रम थियो– काठमाडौं घेराउ । जनपरिचालन अभियान र काठमाडौं जान आर्थिक संकलन चलिरहेको थियो । हाल चितवनमा जनप्रतिनिधि रहेकाले जेएन थपलियासँग सहयोग माग्न गएछन् । पार्टीको नाममा रकम उठाउने तर नबुझाउने आरोप थियो । थपलियाले सहयोग गर्नुपूर्व उनकै अगाडि फोन गरेर मैले यति सहयोग पठाएको छु है कमरेड भनेपछि अनियमिततामा लगाम लागेको थियो । व्यवसायी र व्यापारीले दुःख, मिहिनेत गरेर कमाएको छ भने रसिद माग्छ, ठाउँमा पुग्छ÷पुग्दैन हेर्छ, आर्थिक माग गर्नेको स्थिति बुझ्छ र मात्र सहयोग गर्छ । तर, कालाव्यापारी, सूदखोर, तस्कर र कमिसनखोरले गैरकानुनी वा नक्कली व्यापारीले बाटोघाटोमा जाँच–निगरानी गर्न बसेको प्रहरीलाई जसरी रकम फाल्दै हिँड्छ ।
आन्दोलन बढ्दै जाने र सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष पहुँच पार्टी नेतृत्वसँग नहुने अवस्थामा नक्कलीको समस्या अझ बढ्न सक्छ । पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्ने र सम्बन्धित पीडितले उजुरी गर्नसक्ने संरचनाको विकास पनि गर्न सकिन्छ । सहयोगी तथा स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी र सत्तारुढ पार्टीबीच सहकार्य नभएको भए प्रेम तामाङको नक्कली धन्दा भण्डाफोर हुने थिएन । हाम्रो देशमा जनताले बलिदान गर्ने, दलालले फाइदा उठाउने, बलिदान गर्नेहरु दण्डित हुनुपर्ने ‘इतिहासको मजाक’ चलिरहेको छ । इतिहासको मजाक दुःखान्त अवस्थातिर जाँदैछ । नक्कली धन्दा दलालीकरणकै अर्को रुप हो । जसको विरुद्ध सबैसँग सहकार्य गरेर समाधान वा त्यसको गतिलाई अवरुद्ध गरिदिन सकिन्छ ।
-जन आस्था साप्ताहिक (वर्ष २६ अंक १०)